Mazano: Chirahwe chiduku: ungaudza here kuti ndeupi wevarume vaviri ava vane mudzimai? - TELES RELAY
HOME » MAZANO Mazano: Chirahwe chiduku: ungaudza here kuti ndeupi wevarume vaviri ava vane mudzimai?
Mazano: Chirahwe chiduku: ungaudza here kuti ndeupi wevarume vaviri ava vane mudzimai?
Chirahwe chiduku: ungaziva here kuti ndeupi wevarume vaviri ava ane mudzimai?
May 4, 2019 01: 12 NaFabiosa
Heino rimwe zuva uye mukana mutsva wokuvandudza mano ako pfungwa ! Pasi, tine mufananidzo umo varume vaviri vakakura vanoonekwa: mumwe wavo ari kushingaira kuita ndiro iyo imwe iri kuverenga pepanhau.
Kuziva kuti vose vari vakuru, mumwe angave akaedzwa kuti atende kuti ivo vose vakaroora. Kunyange zvakadaro mumwe chete wavo ane mudzimai. Unogona here kuwana imwe chete mumashure 7?
Kunyangwe iwe unogona kutanga kutarisa zviratidzo zvakajeka zvakadai sesungano, edza kutarisa kunze kwezviri pachena uye funga kunze kwebhokisi.
Kazhinji, zvakakosha kufunga kwenguva yakareba uye kuziva kuti ungashandisa sei kufunga kwakaoma kuitira kuti ugone kugadzirisa dambudziko. chirahwe, iyo inoodza mwoyo vanhu vakawanda.
Zvisinei, nokuita mabasa akadaro, tinobatsira kuchengeta pfungwa dzedu dzakasimba apo tichivandudza mano edu okuteerera zvakanyanya, unyanzvi hunoita kuti tive nehupenyu hwedu hwezuva nezuva uye hupenyu hwedu hwehutano.
Iye zvino kuti maminitsi 7 apfuura, wakambogona kuwana chiratidzo kana zviratidzo kuti uwane murume akaroora here?
Kana iwe usina, regai tibatsire iwe.
Sezvo kushamwaridzana hakuoneki kune mumwe munhu, funga nezvezvinhu zvakapoteredza. Tichitarisa zvakanyanya pamufananidzo wemunhu ari kuverenga pepanhau, unogona kuona girasi yakasvibiswa pamuromo.
Kana ainge asina kuroorwa, zvirokwazvo haazove negirazi mukicheni rake ane lipstick mark.
Kune vakawanda, hazvisi nyore kuona iyo tsanangudzo mumasekondi mashomanana ndokubva watora mhedziso inonzwisisika. Kana wakabudirira, iwe unofara iwe!
Kune avo vasina kuziva mhinduro, musava nehanya. Nokuita mimwe mitambo miduku yakadai, iwe uchakurumidza kuvandudza mano ako ekucherechedza.
Inzwa wakasununguka kugovera chiyero ichi kuitira kuti vadikanwa vako vanogona kuedza!
Astrology: Mwedzi wose webhuruu muMugovera weCorporate 18 unogona kukanganisa simba rezviratidzo zve zodiac - HEALTH PLUS MAG
Masayendisiti anotaura kuti muviri wakanaka wemukadzi uripo uye pano ndizvo zvazvinoita - SANTE PLUS MAG
Mhedziso ye 'Game of Thrones' yakaputsa zvose zvinyorwa munhoroondo yeHBO - BGR
Douala-20 May 2019: Samuel Dieudonné Ivaha Diboua anoramba mafoni panzvimbo pezororo
Prince William's bombhell: Sei Royal aiva iye & TRAUMATISÉ & # 039; - "Taitya kuti haazoiti."
India: Zuva mushure mekupera kwechisarudzo, Yogi Adityanath, wezvematongerwe enyika akaparadzanisa musi waApril 13 | India News
Vincent Lambert: "Chiremba haadi kuzvinzwa," anodaro mumwe wevatongi vevabereki - VIDEO
VANHU & VANHU3,578
TECH & TELECOM1,994